Seho voalohany eto an-dRenivohitra : hanokatra ny fitetezam-paritra i Steffy | NewsMada
Seho voalohany eto an-dRenivohitra : hanokatra ny fitetezam-paritra i Steffy
Ny asabotsy 16 jona izao manomboka amin’ny 8 ora alina ao amin’ny Le Glacier Analakely, hiseho voalohany ho an’ny mponin’Antananarivo sy ny manodidina i Steffy. Nambaran’ity mpanakanto zanak’i Toliara ity fa sady fanokafana ny fitetezam-paritra hataony amin’ity taona 2018 ity io « cabaret » nampitondrana ny lohateny « Tsy hiala » io no fotoana voalohany ahitana azy handeha irery. Mandritra ito « cabaret » ito ny hamoahany ny tsara indrindra avy any aminy ka hanolorany ireo hira nahafantarana azy toa ny « Papan’i zaza », ny « Mama », ny « Toliara », sns, sy ireo vokatra hafa mbola tsy henon’ny mpankafy. Ankoatra ireo, hihira sanganasana mpanakanto hafa miisa roa ihany koa i Steffy. Ho avy eny an-toerana, amin’io alim-pikoranana io, ihany koa ireo vahiny tsy ampoizina hanotrona an’i Steffy sy ny tariny.
Fantatra fa tena mampiavaka ity mpanakanto ity ny fampisehoana ny kolontsaina vezo. Ho hita eny amin’ny Le Glacier Analakely avokoa izany, miainga eo amin’ny fitafy ka hatrany amin’ny fomba fandihy. Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoany aorian’io seho io kosa ny fanomanana hira vaovao miampy ilay fitetezam-paritra.
Tahaka izao ny nambarany raha namintina ny tolotra omeny mandritra ny « Tsy hiala » : « efa ela no nanomana io seho io ka tsy hanao zavatra hanala baraka aho fa hiezaka ny hanome ambiansa mafana ho an’izay ho tonga ao ».